HL-L3230CDN | Brother Myanmar
ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီး LED ရောင်စုံ printer ၊ မျက်နှာပြင် နှစ်ဖက်လုံး print ထုတ်နိုင်ပြီး ဖုန်းမှသုံးနှိင်တဲ့ printer
ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ LED ကာလာ printer ၊ မျက်နှာပြင်နှစ်ဖက်လုံးကို အလိုအလျောက် ကာလာ print ထုတ်နိုင်ခြင်း၊ မြန်ဆန်တဲ့ print ထုတ်နှုန်း နဲ့ မြင့်မားတဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း၊ ဖုန်းမှ တိုက်ရိုက် print ထုတ်နိုင်ခြင်း၊ ဈေးသင့်တဲ့ မှင်တောင့်နဲ့ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး အရည်အသွေးပြည့် ရုပ်ပုံရရှိခြင်း၊
၁၈/၁၉ ppm အထိ အမြန်နှုန်း (A4/LTR)
အကောင်းဆုံး print ထုတ်ခြင်း နှင့် အထင်ကြီးစရာ လုပ်ဆောင်မှု
ကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်အတူ အိမ်နှင့် ရုံးလုပ်ငန်းအတွင်း print လိုအပ်ချက်များအတွက် ကျစ်လစ်သည့် Brother ၏ colour laser printer HL-L3230CDN က တောက်ပသော လုပ်ငန်းခွင်သုံး colour အရည်အသွေး ရရှိစေပြီး ကုန်ကျစရိတ်ချွေတာခြင်းကို အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်ပေးမှာပါ။
မြန်ဆန်သည့် print အမြန်နှုန်း - 18ppm အထိ
၁၅.၅ စက္ကန့်မပြည့်ခင် ပထမစာရွက် print ထုတ်နိုင်စွမ်း
မျက်နှာပြင်နှစ်ဖက်လုံးကို အလိုအလျောက် print ထုတ်နိုင်စွမ်း
မြန်ဆန်တဲ့ print ထုတ်နှုန်းး
၁၅.၅ စက္ကန့်မပြည့်ခင် ပထမစာရွက် print ထုတ်နိုင်ပြီး ၁၈ ppm အထိမြန်နှုန်းမြင့် print ထုတ်နှုန်းနှင့် သင့်ရဲ့အလုပ်လုပ်နှုန်းကို မြှင့်တင်လိုက်ပါ။
စာရွက်အရည်အသွေး 163gsm အထိရှိသောစာရွက် အမျိုးအစားမျိုးစုံကို ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် တစ်ရွက်ချင်း ကိုယ်တိုင်ထည့်နိုင်သည့် single-sheet manual feed slot ပါရှိသည့်အပြင် အရည်အတွက် အများအပြား print ထုတ်ဖို့လိုအပ်ရင်လည်း စာရွက်ရေ ၂၅၀ အထိထည့်ထားနိုင်သည့် အံခွက်လဲပါဝင်ပါတယ်။
မျက်နှာပြင်နှစ်ဖက်ကို အလိုလျောက် print ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်းကြောင့် စာရွက်အလေအလွင့် နှင့် ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချနိုင်ပါသည်။
သင့်ရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချလိုက်ပါ။
Brother ရဲ့ Ultra High Yield မှင်ဗူးတွေနဲ့ print ထုတ်တိုင်း ကုန်ကျစရိတ်လျော့ချနိုင်ပါတယ်။ Toner Save Mode ကိုအသုံးပြု၍ မှင်လျှော့သုံးပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ print တွေကို ထုတ်လိုက်ပါ။
သင့်ရဲ့ Brother laser printer ကို ပါဝင်လာပြီးသားဖြစ်သည့် ကြိုးမဲ့ရော ကြိုးဖြင့်ပါ ချိတ်ဆက်၍ အခြားအသုံးပြုသူများကိုပါ မျှဝေသုံးစွဲလိုက်ပါ။ ပါဝင်လာပြီးဖြစ်သည့် ထိလိုက်ရုံဖြင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်သည့် NFC reader ကြောင့် အသုံးပြုသူဟာ ထိလိုက်ရုံမျှဖြင့် ကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
410 mm x 461 mm x 252 mm
Approx. 75 W
Approx. 8.8 W